Paul's 1st Letter to Timothy – 2azụ
Home / Bible / Akwukwo ozi / Paul's 1st Letter to Timothy
1:1 Paul, Onyeozi nke Jesus Christ site ikike Chineke Onye Nzọpụta anyị na Kraịst Jizọs olileanya anyị,
1:2 Timoti, hụrụ n'anya nwa n'okwukwe. Grace, ebere, na udo, si n'aka Chineke bụ Nna na site Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.
1:3 Ugbu a, m jụrụ gị ịnọgide na Ephesus, mgbe m wee Macedonia, nke mere na ị ga-ekwu okwu ike megide ndị ụfọdụ na-akụziri a dị iche iche n'ụzọ,
1:4 megide ndị e-aṅa ntị n'akụkọ ifo na-adịghị agwụ agwụ usoro ọmụmụ. Ihe ndị a ugbu ajụjụ ndị dị ka ma ọ bụrụ na ha bụ ndị ukwuu karịa edification na bụ nke Chineke, nke di na okwukwe.
1:5 Ugbu a ihe mgbaru ọsọ nke ntụziaka bụ ọrụ ebere si a obi dị ọcha, na ezi akọ na uche, na ihe unfeigned okwukwe.
1:6 ụfọdụ mmadụ, awagharị n'ebe ihe ndị a, adapụwo ka efu babbling,
1:7 achọ ịbụ ndị ozizi nke iwu, ma na-aghọta ma ihe na ha onwe ha na-ekwu, ma ọ bụ ihe ha na-ekwu banyere ihe ndị a.
1:8 Ma anyị maara na Iwu ahụ bụ ihe ọma, ma ọ bụrụ na onye na-eji ya nke ọma.
1:9 Ịmara nke a, na iwu e setịpụrụ na ebe dị nnọọ, ma n'ihi ndị ezighị ezi na insubordinate, maka impious na ndị mmehie, maka ndị ajọ omume na ndị rụrụ arụ, maka ndị na-akwa patricide, matricide, ma ọ bụ na-egbu ọchụ,
1:10 maka na-akwa iko, maka ụmụ nwoke na-arahụ ụra na ụmụ nwoke, maka atọrọ mmadụ, n'ihi na ndị ụgha, maka perjurers, na ihe ọ bụla ọzọ bụ ihe megidere uda ozizi,
1:11 nke bụ na dị ka Gospel nke ebube nke a gọziri agọzi Chineke, Oziọma nke e nyere m.
1:12 M na-enye ekele ya bụ onye ka m dị ike, Kraịst Jizọs Onyenwe anyị, n'ihi na o weere m na m kwesịrị ntụkwasị obi, ịtụkwasị m n'ozi ọma,
1:13 ezie na mbụ m onye nkwulu, na onye mkpagbu, na nlelị. Ma mgbe ahụ, m nwetara ebere nke Chineke. N'ihi na anọwo m na-eme ignorantly, na ekweghi-ekwe.
1:14 Na otú ahụ ka amara nke Onye-nwe-ayi nnọọ ukwuu, ya na okwukwe na ịhụnanya nke dị n'ime Kraịst Jizọs.
1:15 Ọ bụ a kwesịrị ntụkwasị obi okwu, na kwesịrị nke nabata onye ọ bụla, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa a na-eme ka a zọpụta ndị mmehie, n'etiti onye m akpa.
1:16 Ma, ọ bụ n'ihi na nke a mere na m nwetara ebere, nke mere na na m dị ka mbụ, Kraịst Jizọs ga-egosipụta niile ndidi, maka ntụziaka nke ndị ga-kwere na ya si ndụ ebighị ebi.
1:17 Ya mere,, ka Eze nke afọ, ka-adịghị anwụ anwụ, adịghị ahụ anya, n'ụlọnga Chineke, bụrụ onye nsọpụrụ na otuto ruo mgbe ebighị ebi ma na mgbe. Amen.
1:18 Nke a iwu m na-aja unu, nwa m Timothy, kwekọrọ na ndị amụma, bụ kpọkwasịwo gị: na ị na-efe n'etiti ha dị ka onye agha na a ọma agha,
1:19 ejide okwukwe na ezi akọ na uche, megide ndị na-, site n'ịjụ ihe ndị a, mere a ụgbọ nke okwukwe.
1:20 Otu n'ime ndị a na-Haịmeniọs na Alexander, onye m nyefeela ya n'aka Setan, nke mere na ha nwere ike ịmụta ghara ikwulu Chineke.
2:1 Na otú ahụ ka m arịọ gị, na mbụ, -eme ka arịrịọ ike, ekpere, -arịọ, na n'ikele-ekele nihi mmadụ niile,
2:2 n'ihi na eze, na ndị niile nọ n'ọkwá dị elu, nke mere na anyị nwere ike iduga jụụ na ibi ndụ dị jụụ na niile piety na akpata.
2:3 N'ihi na nke a bụ ezi ihe na ihe-anabata n'anya Chineke Onye Nzọpụta anyị,
2:4 onye chọrọ madu nile ga-azoputa na-abata na ihe ekwupụta eziokwu.
2:5 N'ihi na e nwere otu Chineke, na otu onye ogbugbo nke Chineke na nke ndị mmadụ, nwoke Christ Jesus,
2:6 onye nyere onwe ya ka a gbapụta ya nile, dị ka a na-agba akaebe na-atụrụ oge.
2:7 Nke a na-agba akaebe, M na a họpụtara a nkwusa na onyeozi, (M na-ekwu eziokwu, M na-adịghị na-edina) ka onye ozizi nke ndị mba ọzọ, na okwukwe na ezi-okwu.
2:8 Ya mere, M chọrọ ka ndị mmadụ ikpe ekpere n'ebe nile, agụsikwa ọcha aka, -enweghị iwe ma ọ bụ nkewa.
2:9 N'otu aka ahụ na-, inyom ga-yi uwe, n'ụzọ dabara adaba, chọọ onwe ha na compunction na mgbochi, na bụghị na plaited ntutu, ma ọ bụ gold, ma ọ bụ nkume pel, ma ọ bụ oké ọnụ attire,
2:10 ma na a n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ihi na ndị inyom ndị na-ekwupụta na nraranye ahụ site n'aka ezi ọrụ.
2:11 Ka nwaanyị na-amụta ihe n'ekwughị na niile edonụ.
2:12 N'ihi na m adịghị ekwe ka a nwaanyị na-akụzi, ma ọ bụ na-na ikike n'ebe nwoke, kama ka ọ na-agbachi nkịtị.
2:13 N'ihi na Adam na e guzobere mbụ, mgbe Eve.
2:14 Na Adam adịghị rafuru, ma nwanyị, ebe e rafuru, bụ na njehie.
2:15 Ma ọ ga-azọpụta site ịmụ ụmụ, ma ọ bụrụ na ọ nọgidere na-na okwukwe na ịhụnanya, na nsọ esonyere njide onwe onye.
3:1 Ọ bụ a kwesịrị ntụkwasị obi okwu: ma ọ bụrụ na a nwoke na-achọ ka ndị episcopate, ọ chọrọ a-arụ ọrụ ọma.
3:2 Ya mere, ọ dị mkpa ka a bishop na-apụghị ịta ụta, ndị di nke otu nwunye, na anya doro, akọ, amara, ọcha, ele ọbịa, a nkụzi,
3:3 ọ bụghị onye aṅụrụma, ọ bụghị ike arịọ ma gbochiri, ọ bụghị ise okwu, ọ bụghị n'ọchịchọ ọjọọ;
3:4 ma a nwoke na-eduga ụlọ ya nke ọma, onye nwere ụmụ ndị na-ebutere nile ịdị ọcha.
3:5 N'ihi na ọ bụrụ na a mmadụ na-amaghị otú e si na-edu ụlọ ya, olee otú ọ ga-elekọta Church nke Chineke?
3:6 Ọ ga-abụ a ọhụrụ tọghatara, ka aghara, a na-atọ ha ụtọ site nganga, ọ nwere ike ịda n'okpuru ikpe nke ekwensu.
3:7 Na ọ dị mkpa n'ihi ya kwa na-enwe ezi àmà site ndị dị n'èzí, ka o wee ghara ịdaba aha ọjọọ na ọnyà nke ekwensu.
3:8 N'otu aka ahụ, deacons ga-ezere ya, ọ bụghị abụọ-tongued, eweghi ya nye ọtụtụ wine, adịghị agbalị ka e metọrọ emetọ na uru,
3:9 agbasosi ihe-omimi nke okwukwe na a dị ọcha akọ na uche.
3:10 Na ihe ndị a ga-pụtara mbụ, mgbe ahụ ha ga-eje ozi, -enweghị ndidi na iwe.
3:11 N'otu aka ahụ, ndị inyom ga-adị ọcha, ọ bụghị ndị nkwutọ, na anya doro, kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe niile.
3:12 Dikọn kwesịrị ịbụ di nke otu nwunye, ndị na-edu ụmụ ha na ụlọ nke ha nke ọma.
3:13 N'ihi na ndị jewooro ọma ga-enweta onwe ha a ọma, na ọtụtụ obi ike na okwukwe nke bụ na Kraịst Jizọs.
3:14 Ana m ede ihe ndị a ka ị, na olileanya na m ga-abịakwute unu n'oge na-adịghị.
3:15 Ma, ọ bụrụ na m na-egbu oge, unu mara n'ụzọ nke ọ dị mkpa iji na-eduzi onwe gị na ulo Chineke, nke bụ Church nke Chineke dị ndụ, ogidi na ntọala nke eziokwu.
3:16 Ma ọ bụ n'ụzọ doro anya ukwu, a omimi nke nraranye, nke e gosipụtara na anụ, nke ziri ezi na Mmụọ, nke pụtara ìhè n'ihu ndị mmụọ ozi, nke e kwusaara ndị mba ọzọ, nke a na-kweere na ụwa, nke e ya n'ebube.
4:1 Mmụọ n'ụzọ doro anya kwuru na, na ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ, ụfọdụ mmadụ ga-apụ okwukwe, na-aṅa ntị ndị mmụọ nke njehie na ozizi ndị mmụọ ọjọọ,
4:2 na-ekwu okwu ụgha na omume ihu abụọ, na ebe akọ na uche ha ígwè ọkụ,
4:3 machibidoro alụmdi na nwunye, ezere ihe oriri, nke Chineke kere ka-anabata na inye ekele na ndị kwesịrị ntụkwasị obi na ndị ghọtara eziokwu.
4:4 N'ihi na ọ bụla e kere eke nke Chineke bụ ihe ọma, na ihe ọ bụla a ga-jụrụ nke a na-ji inye ekele nata;
4:5 n'ihi na ọ e doro nsọ site na Okwu Chineke na site n'ekpere.
4:6 Site proposing ihe ndị a ka ụmụnna, ị ga-abụ ezigbo ozi nke Kraịst Jizọs, iriju afọ site okwu nke okwukwe, na site na ezi ozizi na i nwetara.
4:7 Ma zere-enweghị isi na akụkọ ifo nke ndị agadi nwaanyị na. Ma na-enwe onwe gị ka i wee na-enwe ọganihu na piety.
4:8 N'ihi na ihe omumu nke ahụ bụ dịtụ bara uru. Ma piety bụ bara uru na ihe niile, ejide nkwa nke ndụ, na ugbu a na n'ọdịnihu.
4:9 Nke a bụ a kwesịrị ntụkwasị obi, sị na kwesịrị zuru nnabata.
4:10 N'ihi nke a anyị na-oru na ndị na-ekwutọ: n'ihi na anyị na-atụ Chineke dị ndụ, onye bụ Onye Nzọpụta nke madu nile, kasị karịsịa nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi.
4:11 Ntụziaka na-akụziri ihe ndị a.
4:12 Ka onye ọ bụla na-eleda gị na-eto eto, ma bụrụ ihe nlereanya n'etiti ndị kwesịrị ntụkwasị obi na okwu, na agwa, na ọrụ ebere, na okwukwe, na ịdị ọcha.
4:13 Ruo mgbe m na-abata, ịga na-agụ, n'inye ndụmọdụ, na ozizi.
4:14 Atụla njikere ileghara amara na dị n'ime unu, nke e nyere gị site na amụma, na imposition nke aka nke ndị nchụàjà.
4:15 Tụgharịa uche na ihe ndị a, nke mere na ọganihu gị wee pụta ìhè nye niile.
4:16 Lezienụ anya ka onwe gị na ozizi. Achụsonụ ihe ndị a. N'ihi na-eme otú ahụ, ị ga-azọpụta ma onwe gị ma ndị na-ege gị.
5:1 Ị ga-ahụ mba otu agadi nwoke, kama rịọ ya, dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ ndị na nna gị; na-eto eto ndị mmadụ, dị ka ụmụnne;
5:2 na agadi nwaanyị na-, dị ka nne na; na-eto eto na ndị inyom, niile ọcha, dị ka nwanyị na.
5:3 Sọpụrụ ndị inyom di ha nwụrụ bụ ndị ezi inyom di ha nwụrụ.
5:4 Ma ọ bụrụ na ọ bụla di ya nwụrụ nwere ụmụ ma ọ bụ ụmụ ụmụ, ka ya mbụ ịmụta elekọta ezinụlọ ya, na ịrụzu, n'oge ya, ya ọrụ nne na nna ya; n'ihi na nke a bụ ihe dị mma n'anya Chineke.
5:5 Ma nwaanyị nke bụ n'ezie a di ya nwụrụ na bụ nọ n'ụkọ, ka ya na Chineke, ka ọ bụrụ ihe ngwa ngwa arịrịọ ike ma na-ekpe ekpere, abalị na ehihie.
5:6 N'ihi na ọ bụ onye bi na ihe ụtọ bụ ihe nwụrụ anwụ, mgbe ndụ.
5:7 Na-enye ntụziaka na a, nke mere na ha nwere ike ịbụ ihe karịrị nkọcha.
5:8 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere nweghị nchegbu nke aka ya, karịsịa, ndị ezinụlọ nke ya, ọ gọrọ agọ okwukwe, na ọ bụ ya bụ njọ karịa na-ekweghị ekwe.
5:9 Ka a di ya nwụrụ na-ahọpụta onye na-adịghị ihe na-erughị iri isii afọ, onye ahu bu nwunye nke otu di,
5:10 onye nwere àmà nke ya ezi ọrụ: ma ọ gụrụ akwụkwọ ụmụaka, ma ọ bụ nyere ọbịa, ma ọ bụ ka sara ụkwụ ndị nsọ, ma ọ bụ ka ozi ndị na-ata ahụhụ mkpagbu, ma ọ bụ ka na-achụ ụdị ọ bụla nke ezi ọrụ.
5:11 Ma zere ndị na-eto di ha nwụrụ. N'ihi na ozugbo ha ewu na Christ, ha ga-achọ ịlụ di,
5:12 n'ihi na ntaramahụhụ, n'ihi na ha leghaara n'ọkwá nke okwukwe.
5:13 Na n'otu oge nakwa n'enwekwaghị, ha na-amụta na-aga site n'ụlọ ruo n'ụlọ, ịbụ bụghị nanị na-abaghị uru, kamakwa ekwurekwu na ọchịchọ ịmata, na-ekwu okwu nke ihe nke na-adịghị echegbu ha.
5:14 Ya mere, Achọrọ m na Ọpa ịlụ, ka ha mụọ ụmụ ụmụ, na-nne nke ezinụlọ, inye dịghị njikere ohere maka onye mmegide na-ekwu okwu ọjọ.
5:15 N'ihi na ụfọdụ ndị na-ama na e tụgharịa azụ Satan.
5:16 Ọ bụrụ na ọ bụla n'etiti ndị kwesịrị ntụkwasị obi nwere inyom di ha nwụrụ, ka ya ozi ha na ọ bụghị ibu arọ ndị Church, nke mere na e nwere ike ịbụ ezuru ndị bụ ezigbo ndị di ha nwụrụ.
5:17 Ka nchụàjà ndị na opu ọma ga-enwe kwesịrị ugboro abụọ nsọpụrụ, karịsịa ndị na-oru na Okwu na na ozizi.
5:18 N'ihi na Akwụkwọ Nsọ kwuru: "Ị ga Ekechila ọnu ehi dị ka ọ na-azọcha ọka,"Na, "The ọrụ kwesịrị ya na-akwụ."
5:19 Atụla njikere ịnakwere nmegide imegide a nchụàjà, ma e wezụga n'okpuru abụọ ma ọ bụ atọ ndị àmà.
5:20 Adọ aka ná ntị ndị mmehie n'anya onye ọ bụla, nke mere na ndị ọzọ nwere ike egwu.
5:21 M na-agba akaebe n'ihu Chineke na Kraịst Jizọs na hoputara Angels, na ị ga-edebe ihe ndị a na-enweghị prejudgment, ime ihe ọ bụla nke na-egosi n'ihu na ma akụkụ.
5:22 Ị kwesịrị ị na-ngwa ịmanye aka na onye ọ bụla, ma ọ bụ ka ị ga-na-akụkụ na mmehie nke outsiders. Na-onwe gị ọcha.
5:23 Ekwela anọgide na-aṅụ mmiri nanị, ma ime ka eji a ntakịrị mmanya, n'ihi afọ gị na Ugboro esighị ike.
5:24 The Mmehie ụfọdụ ndị e mere ka ọ pụta ìhè, bu ụzọ ha ikpe, ma ndị ọzọ na-egosipụta mgbe e mesịrị.
5:25 N'otu aka ahụ, kwa, ezi omume e mere ka ọ pụta ìhè, ma ọbụna mgbe ha na-adịghị, ha enweghị ike ịnọgide na-ezo.
6:1 Onye ọ bụla na-ejere n'okpuru yoke, ka ha tụlee nna ha ukwu na-kwesiri ọ bụla ùgwù, Ka aha na ozizi Jehova ga-ekwulu.
6:2 Ma ndị na-ikwere nwe, ka ha ghara ilelì ha n'ihi na ha bụ ụmụnna, kama na-eje ozi ha niile ọzọ, n'ihi na ha na-ekwe na hụrụ n'anya, sonyere nke otu
ọrụ. Akụzi nāriọ ihe ndị a.
6:3 Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-akụzi ma, na anaghị kwenye na ụda okwu nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na na ozizi nke kwekọrọ na piety,
6:4 mgbe ahụ, ọ bụ mpako, maara ihe ọ bụla, ma na-ahụsi anya gburugburu ajụjụ na Ise-okwu nke okwu. Site ndị a na-ebilite ekworo, esemokwu, nkwulu, ọjọ suspicions:
6:5 na esemokwu nke ụmụ mmadụ bụ ndị e merụrụ uche na-efunahụ nke eziokwu, onye-atụle uru na-piety.
6:6 Ma piety na ojuju bụ rite uru dị ukwuu.
6:7 N'ihi na anyị na-ada ihe ọ bụla n'ụwa a, na e nweghị ihe ịrụ ụka na anyị nwere ike ime ihe ọ bụla pụọ.
6:8 Ma, enwe nri na ụdị ụfọdụ nke ekpuchi, anyị kwesịrị ịdị na afọ ojuju n'ihe ndị.
6:9 Maka ndị chọrọ ịghọ ọgaranya na-adaba n'ọnwụnwa na n'ime n'ọnyà nke Ekwensu na n'ime ọtụtụ na-abaghị uru na-emerụ ọchịchọ, nke mikpuo ikom na mbibi na na adiana ke adiana.
6:10 N'ihi ọchịchọ bụ mkpọrọgwụ nke ihe ọjọọ. ụfọdụ mmadụ, agụụ n'ụzọ dị otú a, kwụsịrị ife okwukwe na atuhiworo onwe-ha na ọtụtụ sorrows.
6:11 ma unu, Gi onye nke Chineke, gbaara ihe ndị a, na n'ezie gbasoo ikpe ziri ezi, piety, okwukwe, ọrụ ebere, ndidi, umeala n'obi.
6:12 Lụọ ezi ọgụ nke okwukwe. -Ejide ndu ebighi-ebi nke i a na-akpọ, na-eme ka a ọma ọrụ nke okwukwe na n'ihu ọtụtụ ndị àmà.
6:13 M na-ana ị, n'anya nke Chineke, onye enlivens ihe nile, na n'anya nke Kraịst Jizọs, onye nyere ihe àmà nke a ọma ọrụ n'okpuru Pọntiọs Paịlet,
6:14 na-edebe iwu, immaculately, irreproachably, si nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
6:15 N'ihi na n'oge kwesịrị ekwesị, ọ ga-ekpughe gọziri agọzi na na Ike, Eze nke ndị eze na Onyenwenụ nke ndị nwenụ,
6:16 onye nanị na-esetịpụ anwụghị anwụ, na onye bi keerughi ìhè, onye ọ dịghị mmadụ hụtụrụla, ma ọ bụ ọbụna bụ ike ịhụ, onye bụ nsọpụrụ na ebighị ọchichi. Amen.
6:17 Ezikwa ndị bara ọgaranya nke afọ ghara nwere a elu àgwà, ma ọ bụ anya na-ejighị n'aka nke akụ, ma na Chineke dị ndụ, onye na-enye anyị ihe niile n'ụba na-enwe,
6:18 na-eme ihe ọma, ịba ọgaranya na-arụ ezi ọrụ, inye ngwa ngwa, ịkọrọ,
6:19 kpọkọta onwe-ha na àkù nke a ezi ntọala maka ọdịnihu, nke mere na ha nwere ike nweta ezi ndụ.
6:20 Timothy, nche ihe e debe ị, na-ezere olu ẹsabarede novelties na nke na-emegide echiche, nke na-akpọ ihe ọmụma.
6:21 ụfọdụ mmadụ, na-ekwe nkwa ihe ndị a, alawo n'iyì n'ebe okwukwe. Ka amara na na na. Amen.